Muhiimad intee leeg ayay waxbarashadda jaamacadeed u leedahay Afrika? Dadka Afrika waxay isweydiiyaan waxa ay dhab ahaan tahay daraasaadka jaamacadaha, maxay tahay muhiimadooda ama doorkooda
Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 18, 2020 00: 44 No Comments
Xirfadaha aasaasiga ah ee jaamacaddu waa "Cilmi-baaris", qof naftiisa ugu yeera jaamacad waa inuu cilmi baaris ku jiraa, waa inuu leeyahay karti fikradeed oo la xaqiijiyay..
Jaamacaddu waa inay noqotaa qaybtan shaybaarada si loo helo xalka dhibaatooyinka badan iyo kuwa badan ee bulshada iyo jiritaanka aadanaha.
Laakiin Afrika, ka dib markay ka qalin jabiyaan jaamacadda, qalin jabiyayaal badan ayaa wali baran doona xirfado shaqo sida karinta(karinta), jeexjeexinta, rinjiyeynta, tolidda, nijaarnimada, maareynta, maareynta, timo qurxinta, xirfadaha kala duwan ee barnaamijyada kombiyuutarka, makaanikada, iwm. Kaliya si loo noolaado ama loo noolaado.
Sidee dadku sanado badan ku qaadan karaan jaamacadda si ay u qalin jabiyaan oo ay u bilaabaan barashada tolida, tuubooyinka, rinjiyeynta, iwm. ?? Iyada oo dhammaan xirfadahan si wanaagsan looga baran karo xarumaha xirfadaha kala duwan ee xirfadaha. Waa maxay waqti lumis! »
Waxbarashada jaamacadda gebi ahaanba waa mid aad loo buunbuuniyay Afrika sidaa darteed si dhakhso ah ayey u noqonaysaa wax aan faa'iido lahayn. Sababtoo ah waxaan iska indha tiray xirfadda dhabta ah ama doorka jaamacadda iyo aqoonyahannada. Tani waa sababta, aakhirka, dhowr qalinjabiyayaal jaamacadeed oo Afrikaan ah ayaa isu helaya iyaga oo jooga heer xirfadeed, "Dayactirrada halkii ay noqon lahaayeen cilmi-baarayaal iyo naqshadeeyayaal".
Oct01 10: 27